Lionel Messi: Laacibka kooxda Barcelona xujada qandaraaskiisa lagu burburin karo wali waa ansax, La Liga ayaa sidaa yiri – Benaadirtv.com
Lionel Messi: Laacibka kooxda Barcelona xujada qandaraaskiisa lagu burburin karo wali waa ansax, La Liga ayaa sidaa yiri
Leonel Messi oo doonaya inuu ka dhaqaaqo kooxda Barcelona
BTV Sports; Qiimaha lagu sii daayay ee 700 milyan euro (£ 624m) ee qandaraaska Lionel Messi ee Barcelona ayaa weli shaqeynaya, La Liga ayaa sidaas yiri.
Messi, oo 33 jir ah, ayaa ku wargeliyay kooxda Talaadadii inuu doonayo inuu baxo mana uusan tagin tijaabada caafimaadka ee isku diyaarinta xilli ciyaareedka.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa qorsheynaya inuu soo qaato qodob u ogolaanaya inuu kooxda kaga tago si bilaash ah laakiin Barcelona ayaa ku doodeysa inuu dhamaaday waqtigii loo qabtay inay taasi dhacdo.
Tartanka ugu sareeya horyaalka Spain ee La Liga ayaa haatan sheegaya in ayna dib u diiwaan galin doonin xiddigan ilaa heshiiska la dhamaystiro.
Warbixin ay soo saartay kooxda ayaa lagu yiri: “La Liga ma aqbalidoono codsi ah in la ii diiwaangaliyo sidii ciyaartoy ahaan xiriirka kubbada cagta Spain, ilaa inta la bixinayo lacagta lagu burburin karo qandaraaska.”
Messi ayaa ku sugnaa garoonka tababarka Barcelona 10.15am waqtiga maxalliga axadii laakiin ma uusan soo xaadirin.
Qareenada ciyaaryahanka ayaa qorsheynaya inay ku dhaqmaan qodob ka mid ah qandaraaskiisa afarta sano ah, oo la saxiixay 2017, kaasoo u ogolaanaya inuu kaga tago kooxda lacag la’aan haddii uu codsado inuu sidaas sameeyo 10-ka June.
Waxay ku doodi doonaan taariikhdaas, gaar ahaan dhamaadka xilli ciyaareedka, hadda ma khusayso ka dib markii dib u dhac ku yimid coronavirus taasoo horseeday kordhinta xilli-ciyaareedku taasoo la micno ah in kooxdu ay si qoto dheer u ciyaareyso illaa Ogosto.
Previous Previous post: Sii hayaha RW Dalka oo guddoomiyay Shir looga hadlay dhaqaalaha iyo deyn cafinta
Next Next post: Ethiopia falls into violence a year after leader’s Nobel peace prize win